Забур 66 CARS - Nnwom 66 ASCB
1Asase nyinaa momfa ahosɛpɛ nteam mma Onyankopɔn!
2Monto ne din animuonyamhyɛ ho dwom;
momma nʼayɛyie nyɛ animuonyamhyɛ!
3Monse Onyankopɔn sɛ, “Wo nneyɛɛ yɛ nwanwa
wo tumi so
na wʼatamfoɔ nyinaa de suro koto wʼanim.
4Asase nyinaa koto wo;
wɔto ayɛyi dwom ma wo,
5Mommra mmɛhwɛ deɛ Onyankopɔn ayɛ;
anwanwadeɛ a wayɛ wɔ nnipa mu.
6Ɔmaa ɛpo yɛɛ asase kesee;
wɔnante twaa asuo no.
Mommra na yɛnni ahurisie wɔ ne mu.
7Ɔde ne tumi di ɔhene daa daa,
Mma atuatefoɔ nsɔre ntia no.
8Ao aman nyinaa, monhyira yɛn Onyankopɔn,
momma wɔnte mo nkamfo no nnyegyeɛ.
na wamma yɛn nan anwatiri.
10Na wo, Ao Onyankopɔn, wosɔɔ yɛn hwɛeɛ;
na wohoaa yɛn ho sɛ dwetɛ.
11Wode yɛn kɔguu nneduadan mu
12Womaa yɛn atamfoɔ twi faa yɛn so;
yɛfaa ogya ne nsuo mu,
nanso wode yɛn baa baabi a nnepa abu so.
13Mede ɔhyeɛ afɔdeɛ bɛba wʼasɔredan mu
na madi ɛbɔ a mahyɛ wo no so,
14ɛbɔ a mʼano fafa hyɛeɛ na mʼano kaaeɛ
ɛberɛ a na mewɔ ɔhaw mu no.
15Mede mmoa a wɔadɔ sradeɛ bɛbɔ afɔdeɛ ama wo
mede anantwinini ne mpapo bɛbɔ afɔdeɛ.
16Mommra mmɛtie, mo a mosuro Onyankopɔn nyinaa;
momma menka deɛ wayɛ ama me nkyerɛ mo.
18Sɛ mede bɔne hyɛɛ mʼakomam a,
19Nanso, nokorɛm, Onyankopɔn atie me,
wate me mpaeɛbɔ.
a wampo me mpaeɛbɔ
na wanyi nʼadɔeɛ amfiri me so.
ASCB : Nnwom 66